Xuska maalinta carruurta adduunka oo maanta la xusay iyo xaalka carruurta Soomaaliya. – Radio Daljir
Xuska maalinta carruurta adduunka oo maanta la xusay iyo xaalka carruurta Soomaaliya.
Nofeembar 20, 2009 12:00 b 0
New York, Nov 20 – Munaasabadda xuska 20 guurada ka soo wareegtay maalinta ay Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa u aqoonsatay maalinta carruurta adduunka ee ku beegan 20ka Nofembar ee sannad kasta ayaa maanta laga xusay dalal badan oo adduunka ka tirsan.
In ka badan 190 dal ayaa saxiixay maalinta carruurta adduunka, dalal ay Soomaaliya ka mid tahayna kama mid aha xubnaha saxiixay heshiiskaas. Xuska maanta ayaa ku soo beegmay xilli ay dhibaatada iyo gabbood-fallada ka dhanka ah carruutu ay sare u sii kacday.
Jimciyadda Quruumaha ka dhaxaysa ayaa qoraal ay soo saartay oo ku aaddan 20 guurada maalinta carruurta ee caalamiga ah ku sheegtay in 24 kun oo carruur ah oo ay da’ahoodu ka yaryihiin 5 jir ayaa maalin kasta u dhinta xanuuno wax laga qaban karo, taas macnaheeduna waa in ay carruurta tiradaas carruurta ah ay haysato dayacaad baahsan. halka 150 malyan oo carruur oo ay da’ahoodu u dhexeeyaan 5 illaa 14 sano ay u dhintaan tacaddiyo nafsi iyo jismi ah oo ay la kulmaan.
Xuska maalintan oo ku soo beegantay xilli ay dagaallo badan oo ka socda dalal saboolnimo iyo cudurro ay daashadeen, ayaa ay Soomaaliya oo aan saxiixin heshiiskaas ay ka dhacayaan tacaddiyo carruurta ka dhan ah oo ka badan kuwii soo taagnaa 19kii sanadood ee ay dagaalladu dalka ka taagnaayeen. Dhinacyada isku haysta siyaasadda Soomaaliya ayaa gala gabbood fallo carruurta ka dhan ah, sida caruuraha oo loo adeegsado dagaallada, iyo burburin lagu hayo waxbarashadooda iyo noloshooda intaba.
Madaxda gobolka iyo saraakiisha ciidanka oo kormeeray xaafadaha magaalaga Galkacyo.
Hawlgallo ammaan oo ka socda Galkacyo & bilayska oo baaraya falal danbiyeedyadii hore.